U-EMMY ROSSUM UTSHATA USAM ESMAIL EMTSHATWENI WESIXEKO SASENEW YORK - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato U-Emmy Rossum utshata uSam Esmail eMtshatweni weSixeko saseNew York
U-Emmy Rossum utshata uSam Esmail eMtshatweni weSixeko saseNew York
USam Esmail noEmmy Rossum e'Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Ubugcisa be-In-Between 'Costume Institute Gala eMetropolitan Museum of Art ngoMeyi 1, 2017 kwisiXeko saseNew York. Esi sibini sitshatile ngeCawa, ngoMeyi 28. (Ifoto nguJackson Lee / Getty Izithombe)
Ngu: Esther Lee 05/28/2017 ngo-10: 43 PM
UEmmy Rossum Utshatile ngokusesikweni. Inkqubo ye- Iintloni inkwenkwezi kunye nomlawuli Sam Esmail batshintshe izifungo kumsitho womtshato weSixeko saseNew York ngeempelaveki zoSuku lweSikhumbuzo ngeCawa, ngoMeyi 28.
Abantu , eziqale zaqinisekisa iindaba, zixele ukuba uRossum no-Esmail batshata kwi-Conservative Synagogue eMidtown Manhattan. Iindwendwe zibandakanya uHilary Swank, uRobert Downey Omnci, uWilliam H. Macy, uRami Malek, kunye noChristian Slater.
ndilahlekelwe ngumsesane wam womtshato
URossum wayeqinisekisile ngaphambili ukuba ukhethe umyili oyintandokazi waseMelika uCarolina Herrera ukuba azenzele isinxibo sakhe somtshato. Ewe, uza kuyenza, utshilo umdlali weqonga Ewe! Iindaba . Yiyo yonke into endiza kuyithetha! Iifoto kamva zabonisa inkwenkwezi kwisinxibo esimangalisayo se-egxalabeni.
NgoMgqibelo, umtshakazi nomyeni bathathe iifoto zokuziqhelanisa eSutton Place Park kunye namalungu osapho kunye nabahlobo. Umtshakazi ubonakala emhle enxibe ilokhwe emhlophe ye-lace ngelixa umlingane wakhe enxibe isuti kwiphambi lamanzi.
I-imeyile, i-39, iqondise iRossum, engama-30, kumdlalo bhanyabhanya ka-2014 obizwa ngokuba Comet . Kwiminyaka emibini kamva, babetshatile. Kwenzeka ukuba bendikulo bhafu xa kusenzeka, i Iphantom yeOpera Umdlali weqonga uxelele u-Chelsea Handler ngesindululo. Ndaye ndaqonda ukuba kuyenzeka, ndaze ndaphuma ebhafini kuba ndandingafuni ukuba ibali lokuba bendikulo bhafu xa isenzeka. Ndaye ndagodola njengoko bekuqhubeka, ndibuyele ebhafini. Yayingumdlalo weempazamo, kodwa konke kwasebenza.
NgoJanuwari 2016, u-Esmail ngobubele wabulela umfazi wakhe wexesha elizayo ngelixa esamkela iGlobal Globe ngothotho lweTV Mnu Robot . Okubaluleke ngakumbi, kufuneka ndibulele ngokuba ngumhlobo wam osenyongweni, watsho umyeni. Kwaye ndiyakuthanda.
ukuwa kweengubo zeendwendwe zomtshato 2020
iingoma ezingadlalwa emtshatweni
ndiza kuyithengisa phi ilokhwe yam yomtshato